မျက်မှောက်ရေးရာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 401
အယ်ဒီတာ့လက်ရေး ၁၄ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမေရိကန်က ကြိုဆိုပါသည်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားက ကြိုဆိုပါသည်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရိယာက မြန်မာမိသားစုများက ကြိုဆိုနေပါသည် မောင်ရစ်၊ ဇူလိုင် ၁၉ ၊ ၂၀၁၂ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို လာမယ့်စက်တင်ဘာ တတိယပတ်မှာ ဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနားတွေက ဖိတ်ကြားလို့ လာရောက်မယ် … တဲ့။ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ၊ နယူးယောက်တို့က အစုိုးရမင်းများ၊ လွှတ်တော်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် ချီးမြှင့်မှုများကို လက်ခံရယူမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဥရောပနိုင်ငံများ ခရီးစဉ်တွေ သွားရောက်ခဲ့ကတည်းက တကမ္ဘာလုံး တုန်သွားတဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အကျဉ်းစံ ဒီမုိုကရေစီခေါင်းဆောင်၊ မိခင်၊ ဒေါ်စုရဲ့ သြဇာ၊ အရှိန်အ၀ါနဲ့ စွမ်းဆောင်မှုတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ကြရလို့ ကမ္ဘာကြီးနဲ့အတူ မျက်နှာမွဲ ငဒို့ မြန်မာတွေလည်း မျက်နှာပွင့်ကြ၊...
Martyrs’ Day at the Martyrs’ Mausoleum in Rangoon
အာဇာနည်ဗိမာန်သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက် ဂါရ၀ပြု ဓာတ်ပုံသတင်း ဇူလိုင် ၁၉၊ ၂၀၁၂ ယနေ့နံနက် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား ကျင်းပရာ အာဇာနည်ဗိမာန်သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက် ဂါရ၀ပြုသည်။ အခမ်းအနားသို့ ဒုသမ္မတ ဒေါက်တာစိုင်းမောက်ခမ်းလည်း တက်ရောက်ခဲ့သည်။ (ဓာတ်ပုံများ – AP) No tags for this post. Related posts No related posts.
သုပဏ္ဍကဘွဲ့သစ် မင်းလောင်းများ မောင်ခင်အေးတင့် (မဒေါက်)။ ဇူလိုင် ၁၇၊ ၂၀၁၂ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသစ် တက်လာပြီး တနှစ်အတောတွင်းမှာ တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေဟာ အတော်ပြောင်းလဲလာပါပြီလို့ ပြောဆိုတွန်း ပေးသံတွေကြားမှာ တချိန်က အရှေ့တောင်အာရှမှာ ဗမာပြည်ရဲ့ စပါးကျီအဖြစ် လက်မ ထောင်နိုင်စေခဲ့တဲ့ ဗမာပြည်ရဲ့ အသက် သခင်ကျေးဇူးရှင် တောင်သူလယ်သမားကြီးတွေရဲ့ ဒီကနေ့ အပြောင်းအလဲဆိုတဲ့အပေါ် နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ခံစားနေရတဲ့ လက်ရှိ ဘ၀အနေအထားအချို့ကို လက်လှမ်းမီသလောက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ သမိုင်းနောက်ခံ ၁၉၃၀ ဒီနေရာမှာ ၁၉၃၀-၀န်းကျင်ကာလကို သမိုင်းမှတ်တိုင်တခုအဖြစ် ဥပမာပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ၁၉၃၀ပြည့်နှစ်တ၀ိုက်မှာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ရော၊ ဗမာ့သမိုင်းမှာပါ မှတ်လောက်သားလောက် ကြီးကျယ်ထင်ရှားတဲ့ ဖြစ်ပျက်ရပ်တွေ ဖြစ်ပွားခဲ့လို့ပါပဲ။ ကမ္ဘာ့အရှင်းရှင် စီးပွားရေးကပ်ကြီး ဆိုက်ရောက်ခဲ့တယ်။ ဖက်ဆစ်ဝါဒီတွေ အားကောင်းလာပြီး ဂျာမနီပြည်မှာ အာဏာရတယ်။...
မိုးအခအထောက်တော် ဝဝ၁ ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၁၂ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီပဲယင်း အကြမ်းဖက်မှုတွင် ရိုက်နှက်ခံရသူတဦး၏ ဓာတ်ပုံကို မုံရွာမြို့ NLD ၏ Facebook တွင် ယနေ့ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ သူ၏အမည်မှာ ကိုမြတ်ကို No tags for this post. Related posts No related posts.
မုဒိတာရွှေကျောင်း တနှစ်ပြည့် အလှူပွဲတော် ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမှာ ကျင်းပ မုိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ ဇူလိုင် ၁၆၊ ၂၀၁၂ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ ၊ ဟေးဝဒ်မြို့၊ အရှင်ဥာဏိကာဘိဝံသ ကျောင်းထိုင်တဲ့ မုဒိတာရွှေကျောင်း မြန်မာဘုန်းတော်ကြီကျောင်း ၁ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အလှူပွဲတော်ကို ရပ်နီး ရပ်ဝေးက မြန်မာဘုန်းတော်ကြီး ဆရာတော်များ ကြွရောက် ချီးမြှင့်ကြပြီး မြန်မာဧည့်သည်တော်များ လာရောက် ကောင်းမှုပြုကြပါတယ်။ စားသောက်ဖွယ် အဟာရအလှူရှင်များက မြန်မာမုန့် စားဖွယ်မျိုးစုံကို တည်ခင်း ဧည့်ခံ ကုသိုလ်ယူကြပါတယ်။ Tags: ဆန်ဖရန် Related posts နွယ်ခွေ – မေတ္တာနန္ဒစာသင်ကျောင်းက အပြန် (MoeMaKa Interview) (0) နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ဖရီးမောင့်မြို့၊ မေတ္တာနန္ဒ၀ိဟာရကျောင်း တန်ဆောင်တိုင်ပွဲမြင်ကွင်း (0) ငြိမ်းချမ်းအေး...
မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ဝဝ၇ ဇူလိုင် ၁၂၊ ၂၀၁၂ ရန်ကုန်လေဆိပ် နှင့် ဘန်ကောက်မြို့ မြန်မာသံရုံးတွင် အခမဲ့ ဝေငှနေသည့် ဖုန်းကတ်များ (ဓာတ်ပုံ – မိုးမခ) ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ဘန်ကောက်သို့ သွားမည့်ခရီးသည်များကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အသုံးပြုသည့် No tags for this post. Related posts No related posts.
လွှတ်တော်ထဲမှာ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး နဲ့ ဦးမြင့်ဆွေ ဘယ်သူက ပေါ်ပြူလာ ပိုဖြစ်သလဲ တူမောင်ညို ။ ဇူလိုင် ၁၅ ။ ၂၀၁၂ ဒုတိယသမ္မတလောင်း ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး( ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသူတွေကိုနာမည်နဲ့တကွ) ပြည်တွင်းပြည်ပက ထင်ကြေးတွေပေးခန့်မှန်းခဲ့ကြတယ်။ အားလုံးလွဲတယ်။ အခုတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေ ကို ဒုတိယသမ္မတလောင်းအဖြစ် စစ်သားအမတ်များအစုက အမည် စာရင်းတင်သွင်းထားတယ်လို့ဆိုတယ်။ အဆိုပြုခံထားရသူ ဒုတိယသမ္မတလောင်းကလည်း ကြံ့ဖွံ့ပါတီကဖြစ်တယ်။ လစ်လပ်သွားတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နေရာအတွက် အသင့်ခန့်ထားနိုင်ဖို့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝေလွင် ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စစ်သားအမတ်အဖြစ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က စေလွှတ်လိုက်ပြီးပြီ။ ကြည်း ၃၈၅၈၀ ဗိုလ်ကြီးလင်းလင်းကျော် (အစား) ကြည်း ၁၃၉၃၂ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဝေလွင် နဲ့ အစားထိုးလိုက်ပါပြီ။ ဇူလိုင်...
၁၉ ဇူလိုင် အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနား မကွေးမှာ ကျင်းပမည် မကွေးဘကျော်၊ ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၁၂ ဒေသခံ အာဏာပိုင်များကိုယ်တိုင် မကွေးမြို့၊ ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံမှာ အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား ပြုလုပ်မယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။ အစုိုးရ၀န်ကြီးများ၊ အာဏာရ ပါတီခေါင်းဆောင်များ၊ အစုိုးရအရာရှီကြီးများနဲ့ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး အဲသည်နောက်မှာမှ အများပြည်သူ လာရောက်အလေးပြုနိုင်ရန် အချိန်ကို ခွင့်ပြုမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အတိုက်အခံ အင်န်အယ်ဒီပါတီက လူဦးရေ ၂၀၀ နဲ့ ချီတက်အလေးပြုခွင့်ကို တင်ထားသော်လည်း ခွင့်ပြုချက် မရသေးဟု သိရပါတယ်။ အာဇာနည်နေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မကွေးမြို့ခံ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေက သွေးလှူဒါန်းခြင်း၊ ဆေးရုံ ဆေးခန်းများက လူနာများကို ဆန်ပြုတ်အဟာရလှူဒါန်းခြင်းတို့ ပြုလုပ်ကြမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ No tags for this post....
Page 401 of 447«1...399400401402403...447»